Muxuu ka yiri Valverde guuldaradii niyadjabka ahayd ay xalay kala kulmeen kooxda Valencia kulankii finalka ee Copa del Rey? – Gool FM
(Spain) 26 Maajo 2019.Tababaraha reer Spain iyo kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa aaminsan in marka loo fiiriyo wixii ka dhacay kulankii Barcelona iyo Liverpool, la aqbali karo guuldaradii ay xalay kala kulmeen kooxda Valencia.
Barcelona ayaa guuldaro 4-0 kala kulantay kooxda Liverpool kulankii lugta labaad ee wareega afar dhamaadka ee tartanka Champions League kaasoo ka dhacay garoonka Anfield, inkastoo kulanka lugta horey ay ku badiyeen 3-0.
Sidoo kale Kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa ku guuleystay xilli ciyaareedkan 2018-19, Copa Del Rey kaddib markii ay 2-1 ku garaaceen kulankii xalay ee Final-ka ahaa naadiga Barcelona.
Hadaba tababare Ernesto Valverde ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday ciyaartii xalay kaddib wuxuu la hadlay saxaafada waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Macalimiinta waxay had iyo jeer diyaar u yihiin isbadalada”.
“Haddii aad dooneyso inaad i weydiiso inaan guuldareysto kulan final ah iyo wareega siddeed dhamaadka waxaan dooqan lahaa finalka, sidoo kale hadii ay sheekadu tahay afar dhamaadka ama heerka group-yada ee tartanka waxaan dooran lahaa afar dhamaadka”.
“Waxaan u dabaaldegnay horyaalka La Liga isla bishan, waan awoodi weynay inaan wada gaarno rajooyinkeena, waxaan dooneynay inaan ku wada guuleysano wax walba, laakiin guuldarada waa lama huraan”.
Intaas kaddib Ernesto Valverde ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo xiray inuu ka hadlo mustaqbalkiisa kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Waan fiicanahay, macalimiinta waxay mar walba doonayaan dib u habeyn, guuldarada way adag tahay, laakiin waa inaad qaadataa”.